Fotoana kely fanararaotra
“Izay rehetra azon’ny tànanao atao dia ataovy amin’ny herinao” Mpit. T. 9:10
Misokatra eny rehetra eny ny varavaran’ny asa fanompoana. Manodidina antsika eny ireo rehetra mila ny fanampiantsika. Hita hatraiza hatraiza ny mpitondratena, ny kamboty, ny marary sy ny miala aina, ny marary fo, ny kivy, ny tsy manam-pahalalana , ary ny voailika (dia tratry ny tanana avokoa).
Tokony ho adidintsika manokana ny miasa amin’ireo monina eo amin’ny manodidina antsika. Diniho ny fomba tsara indrindra ahafahanao manampy ireo tsy liana amin’ny zavatra ara-pivavahana. Rehefa mitsidika ny namanao sy ny mpifanolo-bodirindrina aminao ianao , manehoa fahalianana eo amin’ny tombontsoan’izy ireo ara-panahy toy ny tombontsoan’izy ireo ara-nofo (izay mandalo) koa. Ambarao amin’izy ireo amin’ny maha-Mpamonjy mpamela heloka Azy i Kristy. Asao ho ao an-tranonao ny mpiara-monina aminao , dia vakio miaraka aminy ireo teny sarobidy avy ao amin’ny Baiboly sy ireo avy ao amin’ny boky manazava ny fahamarinana voarakitra ao. Asao izy mba hiara-mihira sy hiombombavaka amina. Ho eo i Kristy amin’ireny fivoriana madinika ireny, araka izay efa nampanan-tenainy, ary fo maro no ho voakasiky ny fahasoavany.
Maro no manenina hoe mivelona amin’ny fiainana tery izy ireo. Izy ireo ihany anefa dia afaka hahatonga ny fiainany halalaka sy hanan-kery mitaona raha tiany izany. Ireo izay tian’i Jesosy amin’ny fo sy ny saina ary ny fanahy, ary tia ny namany tahaka ny tenany , dia manana saha mivelatra (izay tokony) hampiasany ny fahaizany sy ny hery miasa mangina ananay. Aoka tsy hisy na iza na iza hamela ireo fotoana kely fanararaotra handalo fotsiny, ka hiandrandra asa lehibe kokoa. Mety hahatanteraka amim-pahombiazana ny asa madinika ianao, fa tena tsy hahomby tanteraka kosa eo amin’ny fiezahana hanao asa lehibe kokoa, ary ho latsaka ao amin’ny fahakiviana. Amin’ny alalan’ny fanaovanao izay hitanao fa azo atao amin’ny herinao rehetra , no hampivelarano ny fahaiza-manao ho an’ny asa lehibe kokoa. Amin’ny alalan’ny fanamaivanana ireo fotoana fanararaotra isan’andro amin’ny fanaovana tsinontsina ireo zavatra madinika azon’ny tanana atao , no mahatonga ny maro hafa tsy hisy vokatra sy malazo.
Any amin’ireo saha misy fepetra maha-te handà sy mahaketraka ka maro no tsy maniry ny ho any amin’izy ireny , dia fiovana miharihary maro no nentin’ny ezaka nataon’ireo mpiasa feno fandavan-tena. Nikely aina niasa tamim-piaretana sy tamim-paharetana izy ireo , tsy niantehitra tamin’ny herin’olombelona , fa tamin’Andriamanitra, ary ny fahasoavany nanohana azy ireo. Ny habetsahan’ny tsara vita araka izany dia tsy ho fantatra eto amin’ity tontolo ity, fa ny vokatra voatahy dia ho hita any amin’ny fiainana aoriana.